PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-21 - IDowns iya kowamagqubu kwi-AS Vita
IDowns iya kowamagqubu kwi-AS Vita
Isolezwe ngeSonto - 2017-05-21 - EZEMIDLALO -
KUNESISHO sesilungu esivamise ukushiwo yizinjinga esithi ‘the first million is the hardest” okuchaza ukuthi kulula ukwenza ezinye izigidi uma usudlule ebunzimeni bokwakha esokuqala kodwa komacaphunakusale abayiMamelodi Sundowns kubukeka kuzoba lukhuni satshe ukuphinda izigidi zeCaf Champions League.
Ayiqale kahle amaBrazilians inyathuko yawo yokuvikela iChampions League kodwa ubunzima buqale ukuqonga sebeqhathwa esigabeni samaqoqo ne-Esperance yaseTunisia, iSaint George yase-Ethiopia nezitha zabo ezinkulu i-AS Vita abazozihlasela eStade TataRaphael ngoLwesithathu ngo-4.30 ntambama.
Ubutha beVita neSundowns buphethuke nyakenye ngokuthi aBafana ba Style bakhishwe ezaseDemocratic Republic of Congo kwiChampions League kodwa ngemuva kwesikhashana babuyiselwa emqhudelwaneni.
Babuyele bathatha indawo yayo iVita ngemuva kokutholwa inecala lokuthi yakhipha iSundowns ibophele umdlali owayedonsa isigwebo samakhadi.
Sekuwumlando ukuthi ngokuhamba indlela yonke baze bayosiqukula isicoco seChampions League aBafana ba Style bahlikihla usawoti esilondeni seVita sokukhishwa ngemikhuba yayo.
Akungatshazwa ukuthi leso silonda sisabhibha okuyinto umqeqeshi weSundowns, uPitso Mosimane asanda kuzwakalise ukuthi uyilindele.
“Siyazazi simi kuphi neVita. Siyazi bayabila yinzondo. Siyawazi amaqhinga amabi abazoza nawo. Ngeke kumangaze ukuthola ukuthi abanendaba nokuhlulwa amanye amaqembu inqobo nje uma bezomboza thina kodwa sesike saba la. Sinawo amava,” kusho uMosimane, ngemuva kokwehlula iLamontville Golden Arrows eThekwini ngesonto okuqhathwe ngalo amaqoqo eCaf Champions League ngo-Ephreli. emdlaweni wokuqala wamaphuzu iSundowns ibambane ngo-0-0 neSt Geroge eLucas Moripe. Ngemuva kweVita izonqwamana ne-Esperance ekhaya.
Khonamanjalo umdlali weDowns uPercy Tau kulindeleke angasali kwiBafana Bafana ezomenyezelwa nguStuart Baxter eSafa House ngoLwesine ngo-10.30 ekuseni.
IBafana iyodlala eNigeria, e-Uyo ngoJuni 10 kuhlungelwa i- Africa Cup of Nations eseCameroon ngo-2019.